Ahoana moa no andrahonan’ny fanomezan’i Etazonia fitaovam-piadiana an’i Arabia Saodita ny fandriampahalemana sarotra azo ao Sodàna · Global Voices teny Malagasy
Ahoana moa no andrahonan'ny fanomezan'i Etazonia fitaovam-piadiana an'i Arabia Saodita ny fandriampahalemana sarotra azo ao Sodàna
Manimba ny nofinofinny vahoaka sodaney i Arabia Saodita
Voadika ny 26 Jolay 2019 6:13 GMT
Vakio amin'ny teny Español, عربي, Français, 繁體中文, Italiano, English
Sary (fihodin'ny famataranandro avy aty ankavia): Sodanesy mpanao fihetsiketsehana tamin'ny Avrily 2019 avy amin'i M. Saleh (CC BY-SA 4.0); sarintany manasongadina an'i Arabia Saodita amin'ny loko maitso sy i Sodànna amin'ny loko laoranjy avy amin'i PlanespotterA320 (azon'ny rehetra ampiasaina via Wikimedia Commons); Filoha Sodaney Omar al-Bashir sy ny Mpanjaka Abdulla avy ao Arabia Saodita manatrika ny fotoam-panokafana ny Fihaonambe Arabo ao Qatar (avy amin'i Tribes of the World (CC BY-SA 2.0).
Avy amin'i Mohamed Suliman
Sodaney mpanao fihetsiketsehana an'arivony tamin'ny 3 jona 2019 no nanohy ny hetsika pro-demaokrasia mitaky hananganana fitondrana sivily, tsy manana fitaovam-piadiana ankoatra ny tsy fankatoavana am-pilaminana ry zareo ireo. Mifangarika amin'izany kosa, vonona hitifitra sy hamono ny Rapid Support Forces (RSF), izay mihetsika amin'ny anaran'ny Vaomieran'ny Tafika Tetezamita (TMC) izay miantsoroka vonjimaika an'i Sodàna.
Manodidididina izany fotoana izany tamin'io volana io, nandrotsa-bato hanakana fandefasana fitaovam-piadiana mitentina valo tapitrisa dolara ho any Arabia Saodita ny Antenimieran-doholona ao Etazonia—fanakanana izay lazain'ny filohan'i Etazonia Donald Trump fa kasainy hatao veto.
Nanohana mavitrika ny RSF i Arabia Saodita. Sakaiza mahatoky sady mpiara-dia amin'i Arabia Saodita i Mohamed Daglo mpitarika ny RSF. Tamin'ny May 2019 i Daglo no nihaona tamin'ny printsin'i Saodia handray ny fahefana Mohammed bin Salman ary niantoka azy ny fanohizana ny fiaraha-miasa amin'i Arabia Saodia amin'izao ady ifanaovany amin'i Yemen izao.
Vatsian'ny Saodiana vola sy fitaovam-piadiana ny RSF, koa raha manohana ny fifanaraham-barotra fitaovam-piadiana amin'i Arabia Saodita i Etazonia dia efa manohana ihany koa ny RSF izany ry zareo. Niezaka hiaro ny tombondahiny azony i Arabia Saodita, mpiara-dia stratejika an'i Etazonia ao amin'ny faritra, ka ny nofinofin'ny vahoaka sodaney no potika amin'izany.
Nipoaka tamin'ny desambra 2018 teo ambany fanevan'ny “Fall, That’s All!” [Mianjerà, izay ihany!] ny revolisiona sodaney. Nitaky ny hihaisoran'ny Filoha Omar Bashir sy ny fitondrana tarihany nihoatra ny 30 taona ny olom-pirenena Sodaney. Voaongana i Bashir tamin'ny tapaky ny avrily 2019 ary nandray ny fahefana sady lasa mpitarika an'i Sodàna ho azy ny TMC.
Tamin'ny 3 jona 2019, nampiasa herisetra ny RSF hanaparitahana ireo mpanao fihetsiketsehana manatontosa sit-in sy miantso ny hampijoroana governemanta demaokratika sy entin-tsivily ao Sodàna. Nanamafy ny tatitra voalohany tamin'ity fandripahana ity fa farafahakeliny 100 no voatifitra ho faty, natsipy tany amin'ny reniranon'i Neily ny fatin-dry zareo, ary naolana an-dalambe ny vehivavy.
Mba hanakonana ny heloka vintan-dry zareo, dia nakaton'ny RSF sy ny TMC ny aterineto manerana ny firenena.
Ny ankamaroan'ireto avy amin'ny RSF ireto dia avy amin'ilay vondrona malaza tamin'ny habibiana nataony tany Darfur ka nantsoina hoe “Janjaweed”. Efa namoaka tatitra maro amin'ireo heloka bevava anaty fankahalàna ireo fikambanana iraisampirenena mandala ny zo, tafiditra amin'izany ny “Men With No Mercy,” [Lehilahy tsy manana indra-fo] nosoratan'ny Human Rights Watch. Apetraky ny HRW ho ao anaty lisitra ampahany amin'ireo olona tokony hohadihadian'ny Fitsarana Ady Heloka Bevava Iraisampîrenena” ihany koa i Daglo mpitarika ny RSF.
Ankoatra ny fanohanany ny RSF ao Sodàna, dia tafiditra soa aman-tsara amin'ny ady mandeha ao amin'ny mpiray sisintany aminy ao Yemen i Arabia Saodita. Niditra an-tsehatra ara-miaramila ry zareo tamin'ny taona 2015 ho fanohanany ny governemanta amin'ny fanafihana ataony amin'ny vondrona mpioko Houthi. The Saudi-backed coalition is made up of Voarafitry ny firenena sivy avy ao Afovoany Atsinanana sy Afrika, ary tafiditra amin'izany i Sodàna, izay ny RSF no namany amin'izany, ny vondro-tafika manohana ny Saodiana.
Vondrona maro mpandala ny zon'olombelona no efa nanameloka sy nitsikera ny ady ao Yemen noho ny fanitsakitsahana ny zon'olombelona, ary olona 14 tapitrisa no ahiana ho fatin'ny hanoanana. Hatramin'ny taona 2018, sivily 6872 no maty ary 10.768 no naratra, ka ny voalohany nahatonga izany dia ny daroka baomba avy eny an'habakabaka ataon'ny mpiara-dia amin'i Saodia, araka ny nolazain'ny Ofisin'ny Komisarià Ambony an'ny Firenena Mikambana misahana ny zon'olombelona.
Efa hitan'ny rehetra fa mampiasa miaramila mbola ankizy ny RSF ho alefa any amin'ny Adin'i Yemen. Nanome antoka an'i Arabia Saodita i Daglo fa hijanona any Yemen ny tafika sodaney ho fiarovana ny filaminan'i Arabia Saodita.
Efa eo ampelatanan'i Mohamed bin Salman printsin'i Saodia handray ny fanapahana amin'izao fotoana izao ny fitaovam-piadiana amerikana, printsy izay tsy vitan'ny nanome baiko ny fampijaliana sy ny famonoana mpanao gazety tahaka an'i Jamal Khashoggi, fa manohana tanteraka ihany koa an'i Daglo sy ny milisiny izay mamono ho faty ny mpanao fihetsiketsehana, manolana vehivavy ary maka ankizy ho atao miaramila.
Amin'ny maha-olompirenena sodaney ahy, hitako ho tena mahasadaikatra ahy izany hoe firenena lehibe tahaka an'i Etazonia—izay naorina tamin'ny fotokevitra ny fahafahana sy ny rariny ho an'ny rehetra—no mbola manohy amin'ny fandefasana fitaovam-piadiana any Arabia Saodita.
Mijoro aho, iray izay, amin'ny ezaka rehetra atao ao Etazonia amin'ny ambaratonga rehetra mba hampiato ny fivarotana fitaovam-piadiana Amerikana any Arabia Saodita. Fijoroana ara-maoraly sy pratika tokony horaisin'ny vahoaka Amerikana izany mba hihazonana ny tombontsoa lavitra ezaka ho an'ny olompirenena sodaney.
Manana faniriana roa aho: mba tsy hisy fandripahana hafa intsony hitranga any Sodàna; ary mba hampitsahatra fandefasana fitaovam-piadiana ho an'ny Saodiana izay miaro sy manohana mpamono olona an'ady izay mety hisakana ny faniriako voalohany tsy ho tanteraka i Etazonia.
Mohamed Suliman dia olompirenena Sodaney monina ao Etazonia. Iray amin'ireo mpandrindra ny fanentanana izay nanova ny politikan'i Etazonia amin'ny fanasaziana ara-teknolojia an'i Sodàna izy, ary amin'izao fotoana izao mitsongo dia ireo orinasa shinoa manondrana etona mandatsa-dranomaso ho an'ny fitondrana sodaney. Izy ihany koa no mpandrindra ny tetikasa iray manao izay hanesorana ny votoatin'ny RSF tsy ho aty amin'ny aterineto.
3 andro izayMaraoka
4 andro izayTiorkia